को बन्ला राष्ट्र बैंको गर्भनर, तिनै जना बलिया उम्मेदार – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
केन्द्रमा केही दिनमै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउँछ त्यसपछि बागमती र प्रदेश १ को सरकार फेरबदल हुन्छ
नेपालमा थप ९५३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि ६ जनाको मृत्यु १३७१ जना संक्रमणमुक्त
एमाले केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले अध्यक्ष ओलीलाई प्रतिनिधिभिसा दुई पटक बिघठन गर्नुको कारण के हो ?
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समूहगत छलफल सकियो १० वटै समुह टोली नेतामा तेस्रो धार पक्षबाट कुनै परेनन्
(ईपीएल) उद्घाटन खेलमा काठमाडौंले ललितपुरलाई ७ विकेटले पराजित
को बन्ला राष्ट्र बैंको गर्भनर, तिनै जना बलिया उम्मेदार
अहिले सिफारिस भएका तीनै जना उस्तै दाबेदार भएका कारण अब प्रधानमन्त्रीले जसलाई चाह्यो, त्यही व्यक्ति मुलुकको १७ औं गभर्नर बन्नेछन् ।
प्रकासित : २४ चैत्र २०७६, सोमबार
चैत्र २४, काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारणाले नेपालमा सरकारले लकडाउन गरेको आज १४ दिन भयो तर पनि अझै एक साता लम्बाउने तयारीमा छ सरकार । तर यही समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद पद खाली भएको १९ भइसकेको छ । तर आज सोममार नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा सम्मिलित सिफारिस समितिले नयाँ गभर्नरका लागि डा. राजन खनाल, चिन्तामणि सिवाकोटी र महाप्रसाद अधिकारीको नाम सिफारिस गरेको हो ।
राष्ट्र बैंक ५ चैतदेखि कायमु कायमका भरमा छ । गभर्नरको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीलाई कामु दिएर बसेको थियो । सोमबारको सिफारिसपछि भने अब राष्ट्र बैंकले नेतृत्व पाउने पक्का भएको छ । अर्थमन्त्रालय श्रोतअनुसार सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नेछ ।
डा. चिरञ्जीवि नेपालको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि आकांक्षीहरुको ताति नै थियो । आधा दर्जन बढी आकांक्षीहरु मध्येबाटै समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
सिफारिसमा परेका तीनै जना बलिया दाबेदारका रुपमा हेरिएका व्यत्तिः
हुन् । यसकारण पनि अहिले यो नै व्यक्ति गभर्नर बन्छ, भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था भने छैन ।
तिनैजना बलिया दाबेदार
सिफारिसमा परेका तीनैजना बलिया दाबेदार
हुन् । यस अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । जसमा दुईजना डेपुटी गभर्नरद्वय महाप्रसाद अधिकारी र महेश काफ्ले परेका थिए । अर्का व्यक्ति भने कोइरालाकै तत्कालीन आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवि नेपाल
थिए । दुईजना कमजोर दाबेदार भएका कारण नेपाल गभर्नर हुन्छन् भन्ने नियुक्तिअगावै चर्चा चलेको थियो ।
योपटक भने अवस्था फरक छ । सिफासिरमा परेका कामु गभर्नर सिवाकोटी नेकपामा पनि पूर्वएमाले निकटका व्यक्ति हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकै नजिक देखिने उनी गभर्नरका लागि ठूलै कसरत गरिरहेका छन् ।
अन्यका तुलनामा उनलाई बलियो दाबेदार मानिएको थियो । यसको प्रमुख कारण भने डा. राजन खनाल हुन् । डा. खनाल अर्थमन्त्रालयको सचिव हुँदा नै गभर्नर बनाउन अर्थमन्त्रीले चाहेका छन्। अहिले सिफारिस भएका तीनै जना उस्तै दाबेदार भएका कारण अब प्रधानमन्त्रीले जसलाई चाह्यो, त्यही व्यक्ति मुलुकको १७ औं गभर्नर बन्नेछन् ।
प्रकासित : ९ आश्विन २०७८, शनिबार
लामो समयदेखि १४ वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले सास्ती
प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ गायब भयो सदाचार नीति ?
फाइजर खोप दीर्घरोगी, क्यान्सर, मिर्गौला फेल भई डायलासिस गराइरहेका, प्रत्यारोपण गरिएका व्यक्तिलाई मात्र दिइनेछ
श्रीपेच लगाएर नारायणहिटीमा बस्ने र शासन चलाउने सोच आएपछि सोकेश फुटाउन खोजे